Iodolo kwi-Stock Sex Dolls Ukuthumela ngokukhawuleza kwi-CA, eU.SA Ukufika kwii-3-5 iintsuku
Oonodoli bezesondo kwi-stock
Bonke oonodoli bezesondo abakwiStokhwe basuka ngaphakathi e-US
Oonodoli bezesondo base-US baya kuthunyelwa besuka apha: C/O 18501 Arenth Ave,Isixeko soShishino, CA 91748
Bhrawuza indawo yethu enkulu yokugcina oonodoli bezesondo basekhaya (abasuka e-US) abanokuhanjiswa kuwe ngeentsuku.Urdolls ingcebiso kwivenkile: skrolela ezantsi ukuze ufumane i-100% yoonodoli abatsha bokwenyani base-US.
I-Advanteji kaNodoli weSini okwiSitokhwe:
√ Isitokhwe e-USA.
√ Ukuhanjiswa ngokukhawuleza, ixesha lokuhanjiswa kwe-US 3 ukuya kwiintsuku ze-5 zoshishino.
√ 100% Ayinabungozi.
√ Imveliso entsha.
√ Ixabiso eliphantsi.
√ Ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala.
**Amaxabiso aboniswe ngoonodoli besini abakwi-stock ngowokugqibela kwaye abanakuphinda basetyenziselwe intengiso okanye izaphulelo. Amaxesha okuthumela ngoonodoli bezesondo zesitokhwe basebenza kwiiodolo zase-US kuphela.
Kwisitokhwe + iFaye ilula ukuCoca unodoli we-Sex Torso Ass kunye neModeli yeHip yezoNyango ekumgangatho oPhezulu weTPR yeSiqinisekiso soBunyani
KwiSitokhwe + Imowudi yabucala yokuPakisha iTorso iDoli yeSini iThengisa ngeXabiso eliPhantsi lezoNyango loMgangatho oPhezulu weTPR Material ass kunye neModeli yeHip
KwiSitokhwe + uEva Carry Torso Idoli yeSini yase-US Ukuthunyelwa koMgangatho oPhezulu weTPR Material Ukupakisha ubukhulu 24 * 21 * 14cm
U-Lia + kwiSitokhwe +I-Premium Torso iModeli yoNodoli weSini oMgangatho oPhezulu we-TPR Material Enobunewunewu obugcweleyo Amadoda aSexy Love Doll
I-Tracy+Esitokhweni + Unodoli weSini othambileyo weTorso iModeli ye-Ass yezoNyango ekumgangatho oPhezulu we-TPR weMathiriyeli yabantu abadala abaMhle ngesondo
UVicky + eSitokhweni + Unodoli weSini njengoBomi weTorso Iimpundu iModeli yezoNyango ekumgangatho oPhezulu weTPR weMpatho yoMzimba wokuphulula amaphambili
Kwisitokhwe + iTaisi Ukuhanjiswa kweSex ngokukhawuleza kunodoli weTorso Ass kunye neModeli yeHip yezoNyango ekumgangatho oPhezulu weTPR Material Pocket Pussy yaMadoda
I-Sabina kwi-Stock Torso i-Sex Doll ye-esile iModeli yezoNyango ePhakamileyo ye-TPR Material eSexy Dollsfor Man igcwele
Kwisitokhwe + u-Olga oBulungeleyo ubungakanani beTorso iModeli kaNodoli weSini ngeempundu kuMgangatho oPhezulu weTPR Material yabasetyhini iTorso Oonodoli bokwenyani
Ihlala ihleli+kwiSitokhwe + iTorso Sex Doll Big Mac Umgangatho ophezulu weTPR Material Butt Buttocks Model
Kwisitokhwe + i-esile yamadoda ithambile ukuya kuDoli weSini ochukumisayo weTorso enomtsalane okumgangatho oPhezulu weTPR Material Anal Channel kuphela
Kwi-Stock+Simahla ii-Wigs ezi-2 + Kuphela enye+ yeeNqanawa ngoko nangoko + iMadeleine 141CM Amanzi Amehlo Aluhlaza Amabele Amakhulu Ubomi Obunene TPE Idoli yeSex Super Cuteness AXB A83 Intloko
Thea + In Stock + Iinwele Ezimhlophe Ibele Elikhulu + No. 45 Unodoli Omtsha weSex
US In Stock Sex Oonodoli Jianna TPE 166cm 21# Eyeballs + Permanent Makeup Areola Njengoko kubonisiwe Iin Lo mfanekiso Iinyawo ezimileyo zengqolowa Skin Real SY Doll
I-Aubriella US kwi-Stock Sex Dolls TPE 165cm Iinyawo ezimileyo + I-Wheat Skin Isifuba esiNcinane
I-SY Doll US 161cm uSariah ekwi-Stock Love Dolls 14#amehlo e-Pink Areola Labia eMgangathweni oPhakamileyo we-TPE oGqibelekayo Makeup Ukuma kweenyawo+Llight Wheat Skin
I-SY Doll 160cm Keyla US kwi-Stock Love Dolls Amabele amancinci 210 # Amehlo aMnyama + I-Makeup esisigxina Umgangatho ophezulu we-TPE yeNdalo yoLusu olumileyo
US in Stock Sex Dolls Hadlee 158cm Wheat Skin Big Breast Makeup njengoko kubonisiwe 3#Amehlo amileyo Feet Real TPE SY Doll
I-SY Doll 158cm ScarletteUS kwi-Stock Love Dolls Isifuba esincinci 250 # Ulusu lwengqolowa + Amehlo aMnyama Umgangatho ophezulu we-TPE iinyawo ezimileyo
SY Unodoli 158cm uKyleigh US kwiStokhwe soThanda iiDolls Isifuba esiNcinci#100 Ienyawo ezimileyo Umgangatho ophezulu we-TPE wesikhumba sengqolowa 25#iibhola zamehlo+Ukukhanya okuBrown Areola Labia+Permanent Makeup
Amanqaku kwi-Sex Dolls kwi-Stock US
Ivenkile yeUrdolls ikwazisa ukuba:
* Akuvumelekanga ukugoba imilenze ye thanda unodoli ixesha elide.
* Ngenxa yeempawu ezikhethekileyo zezinto ezinodoli zesini, kulula ukudaya, ngoko nceda ungagqoki iimpahla ezimnyama.
* Musa ukusebenzisa ulwelo olucaphukisayo olufana nezibulali ntsholongwane kunye notywala ukuze ubulale iintsholongwane kwaye ucoce unodoli wokwenyani. Abantu abane-aleji kufuneka bayivavanye imveliso phambi kokuba bayisebenzise.
* Musa ukuhlamba ibhinqa ngetephu. Akuvunyelwe ukucoca ubuso kwiindawo ezinkulu. Ukuba kukho amabala ebusweni bonodoli wokwenyani, ungasebenzisa i-cotton swab efakwe kwi-makeup remover kwaye uyisuse kancinci.
* Musa ukubeka iinyawo zakho kwii-180 degrees. Ukuphakamisa izandla ixesha elide akuvumelekanga. Xa unodoli wesondo ongeyiyo unyanzelekile ukuba ume, ithambo lonyawo lihlaba ulusu. Kufuneka ibuyiselwe kwindawo yayo yokuqala ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa.
Malunga nokuLondolozwa kooNodoli beSitokhwe bangempela
√ Ukuba kukho ioli phezu kwedoli yesini, oku kuqhelekileyo. Sula ngobumnene kwaye usebenzise i-talc ngelaphu elomileyo.
√ Ukuba umphezulu unodoli wangempela ungcoliswe ukungcola kunye namabala, nceda wenze ukugcinwa rhoqo. Ixesha lesondlo liyahluka kumntu nomntu, kwaye kuyacetyiswa ukuba lenziwe kanye ngenyanga.
√ Amalungu oonodoli besondo ahlala egobile ixesha elide, kwaye imibimbi iya kubonakala phezu komhlaba. Nangona kunjalo, i unodoli wesondo ngokwayo ine-elasticity elungileyo kwaye unodoli ubanjwe kwindawo eyandisiweyo. Emva kwexesha, imibimbi iba buthathaka kwaye iyanyamalala. Ukuba umphezulu wedoli wangempela ungcolile, unokuwuhlamba ngesepha, i-gel yokugeza, njl. Emva kokuba ubuso bomile, sebenzisa i-talcum powder kwidoli.
√ I-makeup esiyenzayo Unodoli wokwenene iza ngombala okhethekileyo, ayinavumba, ayinatyhefu, kwaye ayisuki lula. Ukusebenzisa amandla amaninzi kunokubangela ukulahleka kweenwele kunye nokuguquka kwebala. Nje ukuba abathengi baphelelwe lixesha banokuyilungisa ngesikhokelo sethu. Oonodoli bothando banokuguqula kwaye basebenzise izithambiso eziqhelekileyo njengelipstick kunye neblush. Ngolwazi oluthe kratya, nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi.